Mental Health – Healthy Life Journal
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) နွေရာသီရောက်ရင် သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ (Bushfire)လို့ခေါ်တဲ့ မီးလောင်မှုအပါအ၀င် မီးလောင်မှုအားလုံးပေါင်း တစ်နှစ်အတွင်းမှာ ၅၀၀၀၀ ကျော် ဖြစ်ပွားတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ မီးလောင်မှုစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို လေ့လာတဲ့အခါ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းက ရှို့မီးဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရတယ်။...
ဒေါက်တာအုန်းကျော်( အငြိမ်းစား- စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဘရစ်ဘိန်းမြို့တော် တောင်ဘက်ပိုင်းရှိ လိုဂန်ရပ်ကွက်မှာ နိုင်ငံပေါင်းစုံ ဈေးဆိုင် တန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံထွက်ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းချတဲ့ မေမေမြန်မာစတိုးဆိုင် လည်းရှိတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့တစ်နေ့မှာ မေမေမြန်မာ စတိုးဆိုင်က လက်ဖက်ထုပ်နဲ့ အကြော်စုံဘူးဝယ်ယူပြီး စာရေးသူရဲ့ မိတ်ဆွေကိုတာတို့အိမ်ဘက်ကို ခြေဦးလှည့်ခဲ့တယ်။...
ဒေါက်တာအုန်းကျော်(စိတ်ကျန်းမာရေး အထူးကုဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) စိတ်ကျန်းမာရေးအပြင်လူနာဋ္ဌာန ပညာရှင်ပေါင်းစုံ ပါဝင်တဲ့ ပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကို ဆက်လက် ကျင်းပနေပါတယ်။ ရင်ဆိုင်ထိတွေ့စေခြင်းကုထုံး (Exposure Therapy) နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်ထောက်ဆရာဝန်ဂျွန်က မှတ်ချက်ချပါတယ်။ “ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကိုပြောချင်ပါတယ်။ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ရင်ဆိုင်ထိတွေ့စေခြင်းကုထုံး (ExposureIn...
လူတိုင်း အသုံးပြုနိုင်သော စိတ်ကုထုံးများ (၁) ကူညီအားပေး စိတ်ကုထုံး
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) နိဒါန်း စိတ်ကုထုံးကုနည်း(Psychotherapy)ဆိုတာဘာလဲ။ စာရေးသူရဲ့ လူနာတိုင်း မေးမြန်းလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်းပြပါမယ်။ စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးပညာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ကုထုံးအမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ (၁) စိတ်ကုထုံးကုနည်း (Psychotherapy)၊ (၂) ဆေးပေးကုသခြင်း...
ဒေါက်တာအုန်းကျော်(စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) အမျက်ဒေါသနဲ့ စိတ်ဝေဒနာအကြောင်းကို ဆေးကျောင်းသားတွေနဲ့ ဆက်လက်ဆွေးနွေးနေပါတယ်။ “ရှောင်ပြေးလို့လည်း မဖြစ်၊ ခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့လည်း မသင့်တော်တဲ့ အခြေအနေမှာ အကြမ်းဖက်နေတဲ့သူကို ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲ ဆရာ” “စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးပညာမှာ အသုံးပြုတဲ့ နည်းပရိယာယ်ကို” ပိုဆိုးမလာအောင် ထိန်းသိမ်းပေးနည်း” (De-escalation...
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) “အမျက်ဒေါသပြေဆေး ရှိသလား”လို့ ဆေးကျောင်းသူတစ်ယောက်က မေးမြန်းပါတယ်။ “အမျက်ဒေါသကြီး အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာဟာ စိတ်ရောဂါတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်ရင် ကုသနိုင်တဲ့ ဆေးရှိပါတယ်။ လူထုအတွင်းမှာ တစ်နှစ်ထဲမှာ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တဲ့ အပြုအမူ ၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိတယ်။ စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါ (Bipolar...
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) အမျက်ဒေါသနဲ့ စိတ်ဝေဒနာဘာသာရပ်ကို မလေးရှားနိုင်ငံ ဆေးသိပ္ပံကျောင်းမှာ ဆေးကျောင်းသားတွေနဲ့ ဆက်လက်ဆွေးနွေးနေပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲအစမှာ လူနာတစ်ယောက်ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ ဆေးမှတ်တမ်းကို စာရေးသူက ဖတ်ပြပါတယ်။ “ကျွန်တော် အသက် ၄၀ ကျော်ပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း၃၀လုံး...
အမျက်ဒေါသနှင့် စိတ်ဝေဒနာ. . . (၁)
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) မလေးရှားနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားတက္ကသိုလ် ဆေးသိပ္ပံကျောင်းရဲ့ မူဝါဒတစ်ခုကတော့ စိတ်ကျန်းမာ ရေးဆေးပညာကို မသင်မနေရ အဓိက ဘာသာရပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို သင်ယူဖို့ နောက်ဆုံးနှစ် ဆေးကျောင်းသားတွေကို အုပ်စုလိုက် စိတ်ကျန်းမာရေး ဆေးပညာဌာနမှာ...
ဖိစီးမှုများလွန်းတဲ့ ကလေးကို ဘယ်လို ဖျောင်းဖျရမလဲ …
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) ကြောက်စိတ်၊ စိုးရိမ်ပူပင်စိတ်မှာ အပိုင်းလေးပိုင်းရှိပါတယ်။ စိတ်ခံစားမှုပိုင်း၊ အတွေးအခေါ်ပိုင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်လက္ခဏာပိုင်းနဲ့ အပြုအမူပိုင်းတို့ ဖြစ်တယ်။ စိုးရိမ်သောကလွန်ကဲဝေဒနာကို ကုသတဲ့အခါ၊ စိတ်ခံစားမှုကို သက်သာစေတဲ့ ကုထုံး၊ အတွေးအခေါ်ကို ပြုပြင်ပေးတဲ့နည်း၊ ခန္ဓာကိုယ်လက္ခဏာတွေကို လျော့နည်းစေတဲ့ ကုထုံးနဲ့...
လူ လူချင်း ဘာကြောင့် သတ်ကြတာလဲ . . .(၄)
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) ဒေါ်မြမှူးသွယ်မေးထားတဲ့ လူလူချင်း ဘာကြောင့် သတ်ကြသလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဆက်လက် ဖြေကြားပါမယ်။ လူသတ်မှုကျူးလွန်သူတွေထဲမှာ စိတ်ရောဂါကြောင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ တစ်ဝက်လောက်က စိတ်ကျရောဂါရှင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။...